आइजिपी नियुक्तिपछिका ३ घन्टा सकस, षड्यन्त्र, त्रास र स्टे अर्डर - Naya Patrika
फागुन ०७३ रातको १२ बजेबाट आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले ३० वर्षे सेवाधिका कारण अनिवार्य अवकाश लिँदै थिए । त्यसो हुँदा २ फागुनअगावै नेपाल प्रहरीको भावी आइजिपी नियुक्त गरिनु आनिवार्य थियो । रेसमा मलगायत नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल र बमबहादुर भण्डारी थियौँ । त्यसमध्ये चर्चाको केन्द्रमा म र सिलवाल थियौँ ।
मविरुद्ध षड्यन्त्र भयो
आइजिपी नियुक्ति सरकारको तजबिजको विषय हो । त्यसका लागि सरकारले प्रहरी नियमावली ०७१ लाई आधार मान्छ । त्यसवेला पनि सरकारले नियमावलीलाई आधार बनायो । सोही आधारमा म प्रतिस्पर्धीमध्ये योग्य ठहरिएँ ।
त्यसो हुँदा नेपाल प्रहरीको भावी आइजिपीका रूपमा म नियुक्त हुँदै छु भन्ने चर्चा चल्नु स्वाभाविकै थियो । यही विषयमा पत्रपत्रिकामा समाचार पनि आए । अनलाइनले यसलाई विषयवस्तु बनाए । मेरा विरोधीले यसमै खेले ।
२ फागुन आइजिपी नियुक्त हुने समय थियो । तर, २८ माघमै मेरो नियुक्तिको विषयलाई लिएर अदालतमा रिट प-यो । रिट हाल्ने कपिलदेव ढकाल थिए । उहाँले किन रिट हाल्नुभयो, जानकारी भएन । तर, यसले मलाई झस्कायो । किनकि यसमा षड्यन्त्रको गन्ध थियो । सायद सरकार पनि यस विषयमा जानकार थियो ।
२९ माघका दिन शनिबार थियो । त्यस दिन सबै सरकारी कार्यालय बन्द हुने हुँदा आइजिपी नियुक्ति थाती नै रह्यो । मेरा विरोधीले यसको पनि भरपुर प्रयोग गरे । त्यसको परिणाम आइतबार देखियो ।
सरकार प्रमुख प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो ।
उहाँले मन्त्रिपरिषद् बैठक आइतबार ४ बजेका लागि राख्नुभएको रहेछ । त्यो बैठक आइजिपी नियुक्तिकै लागि थियो । खै किन, ४ बजेको बैठक स्थगित गर्नुभयो । त्यसको सट्टा ९ बजे बैठक बस्यो । बैठकमा नेपाल प्रहरीको भावी आइजिपीका लागि मेरो नाम प्रस्ताव भएछ । प्रस्ताव कर्कट ध्वनिका साथ पास पनि भएछ ।
मन्दिर हिँडेको गाडी गृह मन्त्रालयतर्फ मोडियो
म घरमै थिएँ । गृह मन्त्रालयबाट फोन आयो । फोन कसको थियो, मैले बिर्सें । तर, उक्त फोन म आइजिपीमा नियुक्त भएको विषयमा थियो । त्यसलगत्तै रमेश लेखकको फोन आयो । मलाई बधाई दिनुभयो । मैले धन्यवाद दिएँ । त्यसपछि बालकृष्ण खाणको फोन आयो ।
त्यसलगत्तै शंकर भण्डारीको फोन आयो । सबैको फोन बधाई सम्बन्धमा थिए । फोनको घन्टी बजिरह्यो । उत्तर दिन भ्याईनभ्याई भयो । घरमा आगन्तुकको भिड लाग्यो । सबैको उद्देश्य मलाई बधाई दिनु थियो ।
२० मिनेटको कुराइपछि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँग बल्ल भेट भयो । लड्डु साथमै थियो । उहाँलाई दिएँँ । उहाँले खानुभयो । बधाई पनि दिनुभयो । तर, उहाँको अनुहारले अरू नै केही बताइरहेको थियो । त्यसले मलाई अझ झस्कायो । तर, म केही बोलिनँ ।
म धर्मप्रति आस्था राख्ने मान्छे । मैले नजिकै रहेको खड्ग भद्रकाली मन्दिर सम्झिएँ । एकपटक दर्शन गर्न मन लाग्यो । गाडी लिएर मन्दिरतर्फ लागेँ । बाटाभरि बधाई दिनेहरू लामबद्ध थिए । सबैलाई हात हल्लाउँदै अघि बढेँ ।
मन्दिरको दर्शन गरेँ । एक्कासि बूढानीलकण्ठ मन्दिर सम्झिएँ । त्यसको पनि दर्शन गर्न मन लाग्यो । खड्ग भद्रकालीबाट बूढानीलकण्ठतर्फ मोडिएँ । फोन निरन्तर बजिरहेको थियो । सबै फोन बधाईकै सन्दर्भमा थिए ।
म शेरबहादुर देउवाको निजी निवास प्रवेश गर्ने मोडमै पुगेको थिएँ । गृह मन्त्रालयबाट गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीको फोन आयो, उठाएँ । उहाँले पनि बधाई दिनुभयो । उत्तरमा थ्यांक्स भनेँ । उहाँले नियुक्तिपत्र बुझ्न तुरुन्तै आउन भन्नुभयो । मन्दिर दर्शन गर्न हिँडेको म, के गरौँ गरौँ भयो । एकछिन रोकिएँ । तुरुन्तै गाडी मोड्न लगाएँ । अनि गृह मन्त्रालयतर्फ लागेँ ।
गृह मन्त्रालयस्थित गृहसचिवको कार्यकक्षमा प्रवेश गरेँ । गृहसचिव रेग्मी कार्यकक्षमै हुनुहुँदोरहेछ । बधाई दिनुभयो । लड्डु बाटोमै किनेको थिएँ । उहाँलाई दिएँ । उहाँले खुसी हुँदै लिनुभयो । मलाई उहाँले नियुक्तिपत्र दिनुभयो । नियुक्तिपत्र हेरेँ । आइजिपी नियुक्तिका सम्बन्धमा रहेछ । त्यसमा मेरो नाम रहेछ ।
गृहमन्त्रीले निवासमै २० मिनेट कुराए
मैले नेपाल प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्झिएँ । नेतृत्वमा उपेन्द्रकान्त अर्याल नै थिए । उहाँबाट आशीर्वाद लिने मनसाय पलायो । प्रहरी प्रधान कार्यालय जाने मनस्थिति बन्यो । गृहसचिवले अब कहाँ जानुहुन्छ त ? भनेर सोध्नुभयो । किन सोध्नुभयो, थाहा भएन । मैले राम्रै उद्देश्य रहेको बुझेँ । मैले प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित नेतृत्व भेट्न जान लागेको बताएँ । उहाँले त्यसो होइन, बरु गृहमन्त्रीलाई भेट्नुहोस् भन्नुभयो ।
के गरौँ गरौँ भयो । गृहसचिवको आदेश नमान्ने विषय पनि भएन । म मन्त्रीनिवास ललितपुरस्थित पुल्चोकतर्फ मोडिएँ । श्रीमती पनि साथमै थिइन् । मन्त्री क्वार्टर छिरेँ । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि बस्ने क्वार्टरबारे जानकार थिएँ । म सीधै त्यतै लागेँ । निवासभित्र छिरेँ । तर, गृहमन्त्रीले भेट नै दिएनन् । २० मिनेटजति कुराए । अब भने मलाई शंका लाग्यो, केही त भइरहेको छैन ?
२० मिनेटको कुराइपछि गृहमन्त्रीसँग बल्ल भेट भयो । लड्डु साथमै थियो । उहाँलाई दिएँँ । उहाँले खानुभयो । बधाई पनि दिनुभयो । तर, उहाँको अनुहारले अरू नै केही बताइरहेको थियो । त्यसले मलाई अझ झस्कायो ।
तर, म केही बोलिन । केही मिनेटको भेटघाटपछि म मन्त्रीनिवासबाट बिदा भएँ । मन्त्री क्वार्टरको गेटबाट निस्केको मात्रै के थिएँ, फोहोरको डंगुर बोकेको गाडी सामुन्ने देखा प-यो । यसले पनि मनमा केही शंका पैदा ग-यो । किनकि, म धार्मिक आस्थाबाट प्रभावित मान्छे । यस्ता विषयले केही मिनिङ बोकेको म ठान्छु ।
स्टे अर्डरले स्तब्ध भएँ
करिब ११ः३० भएको थियो । म सरासर घरतर्फ आएँ । बाटोेभरि फोनको घन्टी बजिरह्यो । कति फोन त मैले उठाउनै भ्याइनँ । करिब १२ बजेको आसपास । म घर पुग्दै थिएँ । बाटोमै कसैले फोनमा ‘आइजिपीमा भएको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर जारी ग-यो’ भने । म स्तब्ध भएँ ।
यहीबीचमा आइजिपीको फुली लगाउने विषय उठ्यो । मेरो नियुक्ति १ गते भएको छ । तर, उपेन्द्रकान्त अर्यालको अवकाश २ गते रातको १२ बजे मात्रै हुन्छ । १ गते नै आइजिपीको फुली लगाउँदा यसले ठीक सन्देश प्रवाह नगर्ने देखेँ । किनकि, मैले फुली लगाउनासाथ मुलुकमा दुईजना आइजिपी हुने अवस्था आउँथ्यो । त्यसैले मैले जानीजानी रोकेँ ।
मविरुद्धको मुद्दा अदालतमा थियो । मेरासामु मुद्दा लड्नुको विकल्प थिएन । वकिलको खोजीमा लागेँ । तर, काबिल मानिएका वकिलहरू त महिना दिनअघि नै विरोधीले बुक गरिसकेका रहेछन् । मविरुद्ध षड्यन्त्र भएको रहस्य त्यसपछि थाहा पाएँ ।
घर पुगेँ । बधाई दिनेहरूको भिड थियो । बधाई लिने कि नलिने भन्ने भयो । मनमा अनेक कुरा खेल्न थाले । अब बहकिएर होइन, परिस्थितिलाई सम्हाल्नुपर्छ भन्ने भयो । मसँग त्यसको विकल्प पनि थिएन । म परिस्थितिलाई सम्हाल्नतर्फ लागेँ । बधाई दिनेहरूको फोन आउन कम भयो । घरमा आउनेहरूको भिड पनि हट्यो ।
प्रहरी नियमावली ०७१ कै आधारमा म आइजिपी नियुक्त भएको थिएँ । तर, तीन घन्टा नबित्दै मेरा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर जारी ग-यो । अब यसविरुद्ध लड्नुबाहेक मसँग अर्को कुनै विकल्प थिएन । किनकि, षड्यन्त्र भएको मलाई आभाष थियो ।
मलाई नेपाल सरकारले ९ बजे आइजिपीमा नियुक्त ग-यो । तर, मेरा विरुद्ध प्रतिस्पर्धी मानिएका नवराज सिलवाल १० नबज्दै अदालत पुगेछन् । अदालतले तत्काल रिट दर्ता गरेछ । दायाँबायाँ केही नगरी १२ बजे नै ‘स्टे अर्डर’ जारी गरेछ । अदालतको मविरुद्ध यति चाँडो निर्णय किन ? मैले यसको उत्तर अहिलेसम्म पनि पाउन सकेको छैन ।
षड्यन्त्रको सिकार भएँ
नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनमा बिरलै हुने षड्यन्त्रको सिकार म बन्न पुगेँ । यसले प्रहरी संगठनको भावी नेतृत्वमा अनिश्चितता पैदा ग-यो । अब को हुने त संगठनको आइजिपी ? उत्तर सजिलो थिएन । विरोधीले यसैमा खेल्न थाले ।
एसएसपीबाट डिआइजीमा बढुवा हुँदा एक नम्बरमा नवराज सिलवाल थिए । विरोधीले कायममुकायम आइजी सिलवाललाई बनाउनुपर्छ भन्न थाले । तर, सरकार उनको पक्षमा थिएन । किनकि उनी सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत गइसकेका थिए ।
अब प्रहरी नियमावली परिवर्तनको विकल्प रहेन । सरकारले हतार–हतार मन्त्रिपरिषद् बैठक डाक्यो । प्रहरी नियमावली परिवर्तन ग-यो । अनि नेपाल प्रहरीको कामु आइजिपीमा प्राविधिकतर्फका एआइजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेल नियुक्त भए ।
३ फागुनमा उनले निवर्तमान भएका उपेन्द्रकान्त आर्यालयलाई बिदाई गरे । बिदाईमा म पनि सहभागी थिएँ । त्यसपछि मैले आइजिपीको हैसियतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हाजिर चढाउँदै गएँ ।
विरोधीले महिनादिनअघि नै वकिल बुक गरे
मविरुद्धको मुद्दा अदालतमा थियो । मसामु मुद्दा लड्नुको विकल्प थिएन । वकिलको खोजीमा लागेँ । तर, काबिल मानिएका वलिकहरू त महिनादिनअघि नै विरोधीले बुक गरिसकेका रहेछन् । मविरुद्ध षड्यन्त्र भएको रहस्य त्यसपछि थाहा पाएँ । जोडजाड गरेर २५ जनाजति वलिक जम्मा गरेँ । त्यसको नेतृत्व रमनकुमार श्रेष्ठले गरे । किनकि, उनी महान्यायाधिवक्तासमेत थिए ।
बहस चल्दै गयो । मेरो पक्षमा बहस गर्नेहरूले विगतका नजिर झिके । सबैभन्दा चोटिलो नजिर एसएसपीबाट डिआइजीमा बढुवा हुँदा हामीविरुद्ध परेको मुद्दा थियो । त्यसवेला हामीभन्दा सिनियर एसएसपीको बढुवा नहुँदै हाम्रो बढुवा भएको थियो । बढुवा हुनेमा मलगायत नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल र बमबहादुर भण्डारी थियौँ ।
मुद्दा हाल्ने रविप्रताप राणा, पूर्णसिंह खड्कासहितको टोली थियो । उनीहरूले वरिष्ठता मिचेर बढुवा गरेको भन्दै मुद्दा हालेका थिए । मुद्दा सुशीला कार्कीको बेन्चमा पुग्यो । उनले त्यसवेला बढुवामा वरिष्ठता लागू नहुने भन्दै हाम्रो पक्षमा फैसला गरिन् ।
मेरो पक्षमा वकालत गर्ने वकिलले यही नजिर राखे । तर, त्यसको कुनै सुनुवाइ भएन । त्यसपछि अब म हार्छु भन्ने लाग्यो । नभन्दै ८ फागुनमा मेरो नियुक्ति बदर भयो । आइजिपीको नियुक्ति लिएको म पुनः डिआइजीमा झरेँ ।
नेपाल प्रहरीमा भावी आइजिपी नियुक्ति झन् पेचिलो बन्न पुग्यो । नवराज सिलवाल आफैँ आइजिपी नियुक्त हुन चाहन्थे । तर, सरकार उनको पक्षमा थिएन । अदालत अब प्रतिस्पर्धीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा आइजिपी नियुक्त गर्ने भन्दै कासमु संकलनतर्फ लाग्यो ।
सिलवाल पनि यही चाहन्थे । किनकि, सिलवाललाई लगेको थियो, ‘कासमु नम्बर मेरै धेरै छ ।’ अदालत तथ्यांक संकलनमा लाग्यो । तथ्यांक संकलन भए । कासमु नम्बर जोड्दा प्रकाश अर्याल पो अघि देखिए । अर्याल प्रहरीको आइजिपीमा नियुक्त भए । उनलाई बधाई दिने सबैभन्दा पहिलो सायद मै थिएँ ।